Mhinduro Yekukurumidza: Maitiro Ekubvisa Chloramine Kubva Mvura Yehove - BikeHike
musha » zvakasiyanasiyana » Mhinduro Yekukurumidza: Nzira Yokubvisa Chloramine Kubva Mvura Yehove
Unobvisa sei chloramine kubva mumvura yepombi zvakasununguka?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti chloramine ibude kubva mumvura yemupombi?
Ko chloramine inokuvadza hove here?
Chii chinoderedza chloramine?
Ko carbon filter inobvisa chloramine?
Vitamin C inobvisa sei chloramine kubva mumvura?
Unogona kufefetedza chloramine here?
Unogona here kubvisa chloramine kubva pombi yemvura nekubika?
Ndingaite sei Dechlorinate mvura nekukurumidza?
Yakawanda sei chloramine ine chepfu kuhove?
Unoita sei Dechlorinate mvura ine sodium thiosulphate?
Ko vitamini C inobvisa chloramine here?
Ko sodium thiosulfate inoderedza chloramine here?
Ndeipi sefa inobvisa chloramine?
Ko reverse osmosis inobvisa chloramines kubva mumvura?
Ko catalytic carbon inogara kwenguva yakareba sei?
Miti inobvisa sei chlorine uye chloramine kubva mumvura yepombi?
Zvinotora nguva yakareba sei kuti vhitamini C isaite chlorine?
Mvura yemupombi inofanira kugara kwenguva yakareba sei kuti ibvise chlorine yehove?
Mvura inofefetera inobvisa chlorine here?
Nei usingafanire kudzosera mvura zvakare?
Muto wendimu unokanganisa chlorine here?
Nzira iri nyore uye inoshanda yekubvisa chlorine uye chloramines kubva mumvura yako kushandisa makemikari dechlorinators. Kune zvakawanda zvigadzirwa zvinotengeswa zvekushandisa aquarium zvakagadzirirwa kubvisa chlorine. FritzGuard® naFritz Pro Yakanyura Chlorine Remover maviri eiyi.
Kune akati wandei marudzi emasefa anobvisa chlorine nechloramine anosanganisira Reverse Osmosis, Ultraviolet light uye Activated Carbon. Imwe yenzira inoshanda kwazvo yekubvisa chlorine uye chloramine ndeye Activated Carbon.
Evaporation estimate ye 1 ppm yeChlorine kana uchibika magaroni gumi emvura inongopfuura maminitsi matatu nehafu. Nekudaro, zvinotora anenge 10 maminetsi (3.5 awa) yekufashaira kuti ibudise Chloramine yese yehuwandu hwemvura. Chirevo chakakosha zvikuru: Zvemukati zvemakemikari emvura yepombi zvinosiyana matunhu nenyika.
Kunyange zvazvo chloramines inobatsira kuita kuti mvura yako ive yakachengeteka kunwa, inotyisa kune hove, zvinokambaira, uye amphibians. Chloramine inofanira kubviswa mumvura inogara mhuka idzi. Kusiyana neklorini yemahara, makloramine haakurumidzi kupera kubva mumvura, saka unotofanira kutora matanho ekuabvisa.
Chlorine nema chloramines zvinouraya mabhakitiriya ari nitrifying anogadzirisa nitrogen kubva mumhepo kupinda muvhu. Cherechedza: Chipunu chimwe chehumic acid (chimvuramabwe chemhando yehumate) chinogona kuderedza ma chloramines mumagaloni 100 emvura zvichienderana nehuwandu hwema chloramines.
Kufanana neklorini, chloramine inogona kubviswa neimba-yakazara kana nzvimbo yekushandisa kabhoni filtration, iyo inoshanda iyo inowedzera ne activation level yekabhoni.
Zvinenge 2.5 zvikamu zve ascorbic acid zvinodikanwa pakudzikisa chikamu chimwe cheklorini. Sezvo ascorbic asidhi isina kusimba, iyo pH yemvura yakarapwa inogona kuderera zvishoma mumvura yakaderera alkaline. Sodium ascorbate ichaitawo neutralize chlorine. Iyo pH isina kwayakarerekera uye haizochinji pH yemvura yakarapwa.
Chloramine inononoka kuita. Kusiyana neklorini, haiputsi kubva mumvura. Izvo zvakare hazvibviswe nenzira dzakajairwa dzekuchenesa mvura. Ichi ndicho chikonzero kuwana sefa ine simba inogona kuita mutsauko.
Hezvino kana kufashaira kuchibatsira pakubvisa Chloramine mumvura yemupombi: Kufashaidza kunomhanyisa kubuda kweChloramine kubva mumvura yemupombi zvakanyanya, asi kunoramba kuri kunonoka. Iwe unozofanirwa kubika magironi gumi emvura kweinenge awa kuti ubvise zvachose 10 mg/L (milligram paLita) yeChloramine.
3 Nzira Dzakareruka dzeDechlorinate yeMvura Boil & Kutonhorera. Kana mvura ichitonhora, ndipo painowanda magasi. UV Exposure. Rega mvura iri kunze muzuva kwemaawa makumi maviri nemana kuitira kuti chlorine ibude mumhepo pasina gasi. Vitamin C.
Mafungiro ezvishoma se. 2-. 3 ppm inouraya hove zhinji nekukurumidza. Kuti udzivise kushushikana, kudzika kwakadzika se0.003 ppm kunogona kudikanwa.
Wedzera 4mg yesodium thiosulfate pa50ml yesampuli kana chlorine yasara iripo. Zadza mabhodhoro ese, kuve nechokwadi chekusiya pasina mabubbles kana headpace. Unganidza sampuli mu250ml magirazi emidziyo. Wedzera 40 - 50 mg/L ye sodium sulfite kana yasara chlorine iripo.
Ascorbic acid (vitamin C) uye sodium ascorbate inobvisa zvachose chlorine nechloramine, asi inoshatisa nezuva rimwe kana maviri, izvo zvinoita kuti zvishandiswe chete kwenguva pfupi yekushandisa.
Nzira iri nyore uye inoshanda yekubvisa chlorine uye chloramines kubva mumvura yako kushandisa makemikari dechlorinators. Izvo zvose zvinosanganisira sodium thiosulfate, iyo inopindirana neklorini (kana chikamu cheklorini cheklorini) kuti iite ion chloride isingakuvadzi. Iyo chlorine yakazara uye yakabviswa zvachose.
Chloramine inonyanya kubviswa mumvura necatalytic carbon filtration. Catalytic kabhoni, activated kabhoni ine inokwidziridzwa yekubvisa tsvina, ndeimwe yemashoma mafiltration media anogona kubudirira kuderedza ma chloramines kubva mumvura yekunwa.
Uye, zvinopesana neimwe ngano inosimudzirwa zvakanyanya, reverse osmosis zvikamu zvinobvisa chloramine. Muchokwadi, vanozviita nemazvo, nekuti chero yakanaka RO unit ine akati wandei kabhoni mafirita uye mvura inowana imwe inononoka kupfuura neyekutanga.
Iyo carbon media ine hupenyu hurefu hwebasa, kazhinji makore mashanu. Inogona kutsiviwa munenge hafu yeawa pasina ruzivo rwepombi yemvura kana ruzivo rwakakosha - chero munhu anogona kuzviita.
Zvose chlorine nechloramine zvinogona kubviswa mumvura nekufashaidza. Kubvisa hafu yekloramine (half-life) kunotora maminetsi makumi matatu, ukuwo kuita zvimwechete kune chlorine kunotora maminetsi maviri. Chlorine inobvisawo gasi kubva mumvura nekungoisiya kuti igare, asi chloramine haina chero nguva inonzwisisika.
Iwe unogona kuwedzera 1 tsp yevhitamini C kusvika ku8oz yemvura mubhodhoro rekupfapfaidza uye woipfapfaidza pamuviri wako nebvudzi mushure mekubva padziva. Wobva wasvetuka mushower. *pfapfaidzo iyi inongogara kwemaawa makumi maviri nemana chete, Vitamin C inodzikira mumvura nekukasira saka haugone kugara wakatenderedza.
Kazhinji, mvura yemupombi inoda kugara panze kwemaawa angangoita makumi maviri nemana kuitira kuti chlorine yese iparare kubva mairi.
Chlorine inoshanduka uye inongoparara mumadziva akavhurika, asi aeration inomhanyisa maitiro zvakanyanya. Aeration haishande kune chloramine, zvisinei, inova isinganyanye kusagadzikana yekuwedzera inoshandiswa nemamwe makanzuru emvura masimba. Iwe unozofanirwa kuwedzera dechlorination agent zvakare.
Njodzi Yakakura Yemvura Yakadzokororwa Mvura inofashaidza inodzinga magasi akanyungudika mumvura, ichiita kuti "flat." Kupisa kwakanyanya kunogona kuitika, zvichiita kuti mvura ipise kupfuura iyo yakajairika yekubikira uye kuita kuti ifashaire zvakanyanya kana yakanganiswa. Nokuda kwechikonzero ichi, ipfungwa yakaipa kubika zvakare mvura mu microwave.
Chlorine chinhu chemakemikari chinoshandiswa semishonga inouraya utachiona kana yawedzerwa kumvura yekunwa. Wedzera zvimedu zveremoni zvishoma kune chirongo chako chemvura (kana madonhwe mashoma emuto weremoni) kuti ubatsire kuderedza chlorine. Marimu nemaraimu zvinopa kwakawanda sosi yevhitamini C, iyo yakaratidza kunyura kana kumisa chlorine.
Mubvunzo: Nzira Yokubvisa Chlorine Kubva Mvura Yehove
Mashandisiro Ekushandisa Mvura Yeklorini Kune Hove Tangi
Mubvunzo: Hove Dzinogona Kurarama Nguva Yakadii MuMvura YeChlorine
Mubvunzo: Ikareba Sei Chlorine Inoputika Kubva Mumvura Yepombi Yehove
Imbwa Ichanwa Mvura YeChlorine
Mhinduro Yekukurumidza: Hove Inogona Kugara Sei Mumvura YeChlorine
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Chlorine Mvura Yakaipa Kune Imbwa
Yakawanda Sei Mvura Yekubvisa Kubva Mutangi reHove
Nzira Yokubvisa Mvura Yakaoma Kubva Pahove Tangi
Maitiro Ekubvisa Mvura Mutsetse Kubva Akashandiswa Hove Tangi
Ko Chlorine Mvura Yakashata Kune Imbwa Ganda
Mhinduro Yekukurumidza: Ko Chlorine Dziva Mvura Yakaipa Kune Imbwa